Zvipingamupinyi neApple Pay uye zvinodzoka | Ndinobva mac
Apple Pay ichangobva kuwanikwa kune vatengi veBanka, kusanganisira ini. Nekudaro, sezvo paine zvishoma kana pasina ruzivo nezve izvo uye sei iyo iPhone kana Apple Watch inoshandisa makadhi edu muApple Pay, Ndinoda kunongedzera zvakaitika kwandiri kuti kana zvikaitika kwauri, iwe uzive zvekutaura.
Icho chokwadi ndechekuti sezviri pachena, iyo nzira yekubhadhara Apple Pay, inogadzira account vanhu vanoshevedza "chishandiso" kuti vasaratidze iyo chaiyo kadhi uye nekudaro nekuwedzera iyo yekuchengetedza nhanho yekutengesa.
Kana iwe ukabatanidza kadhi rako reBankia kuWallet uye naro kuApple Pay, zvinogona kudaro kuti unopinda muchinetso icho, chakanyatsotsanangurwa uye uchifunga mashandiro acho mukati mechinhu chedu, chingakuchengetera hurukuro dzinopfuura imwechete mu zvitoro, kunyanya kana zvasvika pakudzosa zvinhu.
Icho chokwadi ndechekuti sezvo ini ndichikwanisa kubhadhara neApple Pay ndinozviita kubva kune yangu iPhone X nekuti ndinofunga ndicho chinhu chakanyanya kugadzikana chinogona kuvapo. Parizvino zvanaka kwazvo, ndanga ndatenga zvimwe muzvitoro nemumafirimu asi hapana chimwezve. Mazuva mashoma apfuura ndakashopa pane hombe yezvigadzirwa zvekuvaka.
Ini ndakatenga zvekuvakisa ndikabhadhara neApple Kubhadhara kuburikidza neiyo iPhone X. Parizvino zvese zvinhu ndezvechokwadi. Tsananguro yandisina kudzora yakamuka apo ndaifanira kudzosa chimwe chezvigadzirwa zvakabhadharwa neApple Pay, shuwa. Kana ndasvika kumafekitori ndinomupa tikiti uye paari kuzondidzosera anondiudza kuti ndimupe kadhi kubva kwarakange kwabhadhariswa. Ndakamupa iro rekunyama kadhi uye chii chakandishamisa kuti musikana akandiudza ... "Haisi iro kadhi rawakabhadhara nekutenga uku". Ndakamuudza ndikaramba ndichiti kusvika, mushure mekuchera zvishoma, takazoona kuti iyo iPhone neApple Pay inoshanda mukati nenhamba yakasiyana. Kana iwe ukapinda muWallet wobva wadzvanya pakadhi raunoda kutanga uyezve pa icon ine «i» pazasi, iwe uchaona kuti iwe unoratidzwa imwe skrini iyo iwe yaunoudzwa kuti mudziyo une inoenderana account account iyo iri yakabatana nenhamba yako yekadhi.
"Panzvimbo pekiredhiti kadhi kana kiredhiti kadhi nhamba, Apple Pay inoshandisa iyo account account nhamba, iyo inogona chete kushandiswa neiyi iPhone"
Saka unoziva, kana izvi zvikaitika kwauri, zvaunofanira kudzidzisa mubatsiri wechitoro iyo skrini iyo kwazvinonyatso kutaura kuti iyi nyowani account kubviswa iri kubva kune yako nhare mbozha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Zvipingamupinyi neApple Pay uye zvinodzoka
Manuel Velasco akadaro
Chinhu chimwe chete icho chinogashira muripo chinoita kuti dzokere kunhare.
Pindura Manuel Velasco
Uye izvo hazvigone kuve chinhu cheBankia?
Rimwe zuva ndakadzosera chigadzirwa kuna Leroy Merlin akabhadharwa neApple Pay neIPhone X.
Musikana akandibvunza iro kadhi rekudzosera mari, ndakaripa uye pakanga pasina dambudziko, rakauya kwandiri pakarepo.
Chinhu chaichoicho chakaitika kwandiri mazuva mashoma apfuura kuIKEA (kadhi rangu rinobva kuBanc Sabadell), asi musikana aindipinda akabva andibvunza kana ndaive ndabhadhara nefoni yangu. Akanga ambozviona kare. Iye zvino ndinoziva kuti kana uchibhadhara nharembozha, iyo yekudzoserwa inoitwawo nefoni uye voila.
Ehezve, iyo sisitimu inoenderera nekudzoka pasina matambudziko, Pedro haasi kutaura izvozvo. Asi, kana mabharani akafunga kutarisa nemaziso, achaona kuti tikiti nekadhi zvine manhamba akasiyana. Ini ndinodzokorora, kana iwe uchida kuzviona, iyo sisitimu ichaigamuchira.
Zvakaitika kwandiri imwe nguva uye mushure mekuzvitsanangura, tarisa kuti kudzoka kuri kuitika zvechokwadi (dai raive kadhi rakasiyana, kukanganisa kunoonekwa). Muzviitiko zvese ini ndaive ndisina kana dambudziko, kunze kwekunge kamwechete apo musikana aifanira kufonera maneja, asi nedudziro zvese zvaive chokwadi.
Izvo zvinoita zvine musoro, akange anzwisisa kuti dambudziko rake nderekuti zvaive zvisingaite kwaari.
Ndakanga ndisina kuzvinzwisisa zvakanaka.
Tim Cook anotaura nezvekuti zvakaoma sei kusvika kumatiririyoni emadhora
Shamba, dzikisa mutengo wako zvakare kwenguva yakati rebei